Fiber optic sensor မူကြမ်း - News - Box Optronics
Fiber optic sensor နိယာမ
၁။ Fiber Optic Sensor ၏နိယာမ - နိဒါန်း
Fibre optic sensors များသည် fiber အမျိုးအစား optic နှင့် fiber optic communication technology ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူပြောင်းလဲလာသည့် sensor အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ fiber-optic sensor သည်ချေးသည့်ပစ္စည်းကိုခံနိုင်စွမ်းရှိပြီးအလယ်အလတ်နှင့်သက်ဆိုင်မှုအနည်းငယ်သာရှိပြီးခိုင်မာသည့် anti-electromagnetic interference စွမ်းရည်ရှိသည်။ အစဉ်အလာအာရုံခံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက fiber-optic sensor သည်အလင်းကိုအထိခိုက်မခံသောသတင်းအချက်အလက်များအတွက်သယ်ဆောင်သူအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ထို့အပြင် optical တိုင်းတာခြင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ဤနည်းပညာအသစ်သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတရုတ်နယ်ပယ်များစွာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
optical fiber ကိုအာရုံခံ၏ 2. နိယာမ - ဖွဲ့စည်းမှု
fiber-optic sensor network ၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းသုံးခုရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည် single-point sensor တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ fiber တစ်ခုသည်ဤတွင်သာအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ အခြားတစ်ခုမှာ multi-point sensor တစ်ခုဖြစ်သည်။ fiber တစ်ခုသည် sensors အများအပြားကို bundle လုပ်တယ်။ ထိုကဲ့သို့သော Sensor အမြောက်အများသည် network monitoring အတွက်အလင်းအရင်းအမြစ်ကိုမျှဝေနိုင်သည်။ ပြီးတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဖိုင်ဘာအာရုံခံကိရိယာရှိတယ်။
ဖိုင်ဘာ optic အာရုံခံ၏ 3. နိယာမ
Fiber sensor ၏အခြေခံအလုပ်လုပ်သောနိယာမမှာပထမအချက်မှာအလင်းအရင်းအမြစ်မှအလင်းကို fiber မှတဆင့် modulator သို့ပေးပို့သည်။ ထို့ကြောင့်တိုင်းတာရမည့်အချက်များနှင့် modulation zone သို့ဝင်ရောက်သောအလင်းသည်အလင်း၏ optical ဂုဏ်သတ္တိများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပြင်းထန်မှု, လှိုင်းအလျား, အလင်း၏ကြိမ်နှုန်း, တစ် ဦး အချို့သောအပြောင်းအလဲအဆင့်နှင့် polarization ကိုပြည်နယ်အတွက်ဖြစ်ပေါ်, etc, modulated signal ကိုအလင်းဟုခေါ်သည်ပြီးတော့ optical fiber ကိုမှတဆင့် photodetector သို့စလှေတျ, နှင့်တိုင်းတာခြင်းဖျော်ဖြေ အလင်း၏တိုင်းတာဂီယာဝိသေသလက္ခဏာများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်တိုင်းတာ parameter သည်ရရှိသောဖြစ်ပါတယ်။
၄။ fiber optic sensor - နိယာမ
Optical fiber တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ဥပမာ - လျှပ်စစ်သံလိုက်နှင့်အနုမြူဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုခုခံနိုင်မှု၊ အချင်းနုပျိုသော၊ insulator တွင်လည်းမရှိသောနှင့် induction မပါရှိသည့်လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများ၊ ရေ၊ ခံနိုင်သောအပူချိန်နှင့်ချေးသည်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောဓာတုဗေဒဂုဏ်သတ္တိများသည်လူတို့၏နားများ (သို့) လူတို့အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောနေရာများ (ဥပမာအနုမြူဓါတ်ရောင်ခြည်asရိယာများ) တွင်လည်ပတ်သည်။ လက်ခံရရှိသူရဲ့အာရုံ။ ပြင်ပသတင်းအချက်အလက်။
Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) စမ်းသပ်မှုများကိုစဉ်းစားသည်